सर्वोच्चको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी पक्राउ – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ सर्वोच्चको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी पक्राउ
पुलेसो २७ पुस, २०७७, सोमबार २०:४५
अवहेलना मुद्दामा अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई अनशन स्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ ।
न्यायालय राजीनितक दलको भर्ती केन्द्र बनेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अपरान्ह चार बजे अनशन बसे लगत्तै सर्वोच्चले डा. केसीलाई भोली बिहान ९ बजे अदालत उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्तगी माग्दै अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हाे।